आशा लामा अछुत तर रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कसरी पवित्र ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आशा लामा अछुत तर रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कसरी पवित्र ?
- अमरदिप मोक्तान
रमेश कोइराला, शर्मिला ढकाल र आशा लामा तिनै जना मेनपावर व्यसायी हुन । रमेश कोइराला कुन आधारले पवित्र घोषित भए ? शर्मिला ढकाल लाई पवित्र बनाउन विजय गच्छदारले जोरसोरले लागेको समाचार छ । दुर्भाग्य के छ भने दुर्गन्धित गच्छदार रुपी गंगाजलको छिड्कावले शर्मिला ढकाल पवित्र घोषित भएकी छिन् । के यहि हो कानुनी शासन कानुनी शासनको अवधारणा ?
हालसालै राजदूत नियुक्ति प्रसंग विवादित बन्यो । विवाद को मुख्य कारण के देखियो भने म्यानपावर व्यवसायीलाई किन राजदूतका लागि प्रस्तावित गरियो ? राजदूत चयन विवाद चरमत्कर्षमा पुगे पछि सरकारले विवादास्पद भनिएका नाम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । तर राजदूतबाट नाम फिर्ता लिंदा काँग्रेसले प्रस्ताव गरेका आशा लामाको नाम मात्र फिर्ता गरियो । यदी विवादको जरो राजदूत हुने व्यक्ति मेनपावर व्यवसायी हुनु हुदैन भन्ने थियो भने आशा लामा लाई मात्रै किन बलि को बोको बनाईयो ?
उल्लेखित प्रसंग एक उदाहरण मात्रै हो । नेपालमा कानुनि राज्यको शासन स्थापित गर्ने कुरा त गरिन्छ तर अन्तमा गएर कानुनको लठ्ठी कमजोर माथि नै बज्रिन्छ । त्यसको उदाहरण हो, राजदूतबाट आशा लामा को नाम फिर्ता हुनु । आशा लामा यदि अछुत हुन् भने रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कुन आधारमा पवित्र भए ? स्मरण रहोस झलनाथ खनालले ल्याह्यार्केल लामालाई मन्त्रि बनाउदा नेपालको मिडिया देखि नेता सम्म ल्याह्यार्केलको विपक्षमा उभिए । फलस्वरूप लार्केललाई मन्त्री पदबाट अपमानित गरेर बर्खास्त गरियो । यहि कुरा आशा लामा को प्रकरणमा देखिएको छ ।
आशा लामाको नाम फिर्ता लिनुका साथै यो प्रसंग सेलाए को जस्तो प्रतित हुन्छ । किनभने नेपालमा कानूनको लठ्ठीमा वर्ग, जाति, अनुहार छर्लंग रुपमा तोकिएको देखिन्छ । माधव नेपालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा हङकङको राजदूत नियुक्ति प्रसंगमा पनि ठुलो विवाद उठेको थियो । विवादको कारण थियो, हङकङमा आदीवासी मूलका नेपाली समुदायको धेरै संख्यामा बसोबास भएकोले त्यहाँको राजदूत नियुक्त गर्दा आदिवासी नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने भन्ने त्यहाँका नेपाली समुदायको माग थियो । तर माधव नेपा ले कानुनको धज्जी उडाउदै मापदण्ड नपुगेका आफ्नो भाई लाई महावाणिज्यदुत बनाए ।
नेपालमा नियमको निर्माण त भयो तर नयां कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा खोट छ । नेपालका नीति निर्माताहरु कुवाको भ्यागुता मात्र भएर बस्नु भएन, नेपाल लाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनु छ भने फराकिलो सोच को विकाश गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । समावेशी गणतन्त्र नेपाल भनिन्छ तर खोइ समावेशी ? सबैलाई समान अधिकारको कुरा गरिन्छ तर खोइ अधिकार ? पूर्वाग्रह रहित राज्य संचालनको कुरा गरिन्छ तर खोइ पूर्वाग्रह रहित राज्य संचालन गरेको उदाहरण ?
आशा लामा राजदूतको मापदण्डका लागि अनुपयुक्त हुन भने राजदूतबाट नाम फिर्ता गरिएको कुरा जायज छ । र त्यो हुनु पनि पर्छ । तर समान पृष्ठभूमिका रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कुन आधार मा राजदूत हुने मापदण्ड का लागि उपयुक्त साबित भए ? त्यो सरकार ले जनता समक्ष खुलाउनु पर्छ । नेपालका नेताहरुले समयको परिवर्तन का कुरा त गरे तर समयले कुन प्रकारको परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुरा बुझेनन् । बरु त्यसको धज्जी उडाउने कार्य गरि रहेका छन् ।
राष्ट्रका लागि अनिस्टकारी संकेत हो भनि बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा जाति र अनुहारको आधारमा भेदभावको रुपमा रहेको सामन्ती संस्कारको अन्त हुन अत्यन्त आवश्यक छ । यस्ता विचारलाई निस्तेज अथवा समुल रुपमा समाप्त गर्न सकिएन भने भविष्यमा नेपाल र नेपालीले नसोचेको दुर्घटना व्यबहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।